छन्दचुलि लिएर आए डा. पौडेल – Radio Roshi
छन्दचुलि लिएर आए डा. पौडेल
कवि डा. गोपाल पौडेल मण्डनेद्धारा रचित कविता संग्रह छन्दचुलीेलाई बजारमा आएको छ ।
अक्षरमार्ग साहित्यिक त्रैमासिकद्धारा प्रकाशित कवि डा. गोपाल पौडेल मण्डनेको कविता संग्रह छन्दचुली छन्दमा लेखिएका कविताहरूको संग्रह हो । नेपाली शास्त्रीय र लोक छन्दमा लेखिएका उनका कविताहरूमा देशभक्तिको भावना, सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति, मानीय संवेग आदिका भाव पोखिएका छन् । समसामयिक विषयमा रचिएका कविताहरू पनि रहेका छन् । केही कविताहरू माया, प्रेम भएर उठेका छन् ।
करिव दुई दर्जन कृतिका सर्जक डा. गोपाल पौडेल मण्डनेले कविता, मुक्तक, गीत, कथा, निबन्ध जस्ता नेपाली साहित्यका लोकप्रिय विधाहरूमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।